नाफा र लाभांश दुवै बढ्दा सेयर भाउ निरन्तर घट्नुको के छ रहस्य ? - Nepali Paisa
नाफा र लाभांश दुवै बढ्दा सेयर भाउ निरन्तर घट्नुको के छ रहस्य ?
Nepali Paisa 2076-5-25
काठमाडौं : लगानीकर्ताले लाभांशको मुख्यतयः आकर्षक आशमै सेयर बजारमा लगानी गरेका हुन्छन् । जसले आकर्षक लाभांश दिन्छ, त्यही कम्पनीमा अधिक आकर्षण हुने गर्छ । यही लाभांशकै लागि वर्षौंदेखि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरु पनि हुन्छन् । तर यतिबेला हाम्रो सेयर बजारमा लाभांश मुखमै आइसकेको छ । धमाधम कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । केही वाणिज्य बैंकहरुले त दसैंअघि नै साधारण सभा समेत गर्दैछन् ।
यसको अर्थ, यतिबेला सेयरधनी हुनेहरुले अब तत्काल लाभांश हात पार्नेछन् भन्ने नै हो । तर लाभांशको सिजनमा पनि सेयर बजारमा चमक नआउँदा भने आम लगानीकर्ता अलमलमा परेका छन् । किन बढ्न सकेन बजार ? भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । आधारभूत हिसाबबाट औसतमा सूचीकृत कम्पनीहरुको अवस्था राम्रो छ । कम्पनीहरुको नाफा माथि जानु, लाभांश अनुपात वृद्धि हुनु सेयर बजारका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर यससँगै लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, सेयर बजारमा ।
यतिबेला आम लगानीकर्ताको आत्मबल भने बलियो हुन सकेको छैन । सरकारका अस्पष्ट र दोधारे नीतिका कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बनेको हो । यसका लागि सरकार तथा सम्बद्ध निकायले मनोविज्ञान सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सुधारका प्याकेज चाहिएको छ । यसबाट आम लगानीकर्ताको मनोभावना माथि जान सक्छ । जसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पर्नेछ ।